Roobab xoog leh oo ka da’ay gobolada Puntland iyo dad laga soo badbaadiyey – Hornafrik Media Network
Qaar kamid ah gobolada Puntland waxaa 24-kii saac ee la soo dhaafay ka da’yey roobab mahiigaan ah.
Roobabka ayaa u badan gobolada Bari iyo Gardafuu, gaar ahaa deegaanada xeebaha, kuwaas oo ilaa ka da’aya qeybo badan ka mid ah gobolka Bari ee Puntland.
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa kamid ah meelaha roobku ka da’yeen saacadihii la soo dhaafay, daadad soo rogmaday ayaa la tegay seddax gaari ku wajahnaa magaalada Boosaaso, waxaana laga soo badbaadiyey dadkii saarnaa gaadiidkaas.
Maamulka gobolka Bari ayaa hakiyey isu socodka gaadiidka magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee Puntland intooda ay roobabku ka da’ayaan.
Gobolka ay Puntland ugu yeerto Gardafuu ayaa isagana laga soo sheegayaa in roobabku ay ka geysteen khasaare naf iyo maalba leh, inkasta oo ilaa hadda aan si dhab loo xaqiiji karin inta uu le’eg yahay.
Dhanka kale roobab iyagu dabeylo wata ayaa caawa la soo sheegayaa in ay ka bilowdeen qeybo ka mid ah gobolada Nugaal iyo Mudug, gaar ahaan deegaanada xeebaha dhaca, waxayna saakay Isgaarsiintu ka go’antahay deegaano ay roobabku aad uga da’ayaan oo ay ka mid tahay Eyl.
Maleeshiyaad hubaysan oo la wareegay xabsiga weyne ee waqooyiga Gaalkacyo